लाइभ चलिरहँदा युवतीले लुगा फुकालेको भिडियो भाइरल – Gazabkonews
लाइभ चलिरहँदा युवतीले लुगा फुकालेको भिडियो भाइरल
श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमानसंग किन नजिक हुन्छन त जब आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरु कै श्रीमान संग सल्किने गरेको देख्न पाइन्छ बिसेषगरि पछिल्लो समय श्रीमान हरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग स ल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ सबैलाइ
त्यसो भन्न मिल्दैन तर खासगरी श्रीमान विदेश हुने महिला हरु अर्कै पुरुष संग मोज मस्ती गरि श्रीमान ले विदेशमा दुख गरि कमाएको सारा सम्पति लिगेर अर्कै पुरुष संग हिडेको हामि देख्न र सुन्न पाउछौ १ श्रीमान नेपाल मै भएको महिलाहरु पनि अर्कै पुरुषहरु संग सल्केको देख्न पाइन्छ बिसेष गरि श्रीमान विदेश मा हुने महिला हरु धेरै देख्न पाइन्छ ।
पहिलो पटक जब फेसबुकमा उसको म्यासेज आयो म झस्किएँ । मुटुको गति थामिए जस्तै भयो । श्रीमान घरमा हुनुन्थेनन् । फेरी पनि मैले कुनै गलत गर्दैछु झैं लाग्यो ।
अनलाईनमा आएको एउटा म्यासेजलाई हेर्न पनि मैले यता उता हेरेँ, कसैले देखेको पो छ कि ? आफैमाथि हाँसे अनि सोचे घरमा कोही पनि छैन् त कोसँग डराएको होला । उसले म्यासेजमा ‘हाय म तीमीसँग मित्रता गाँस्न चाहन्छु’ भनेर लेखेको थियो । म्यासेज पढेर मुहारमा मन्द मुस्कान आयो । तर, आफैलाई होईन जस्तो गरी सम्माहले ।
एउटा नचिनेको मान्छेको अनलाईनमा म्यासेज आउँदा मैले चाँसो किन राख्नेँ ? श्रीमानको कुरा मनमा आउने बित्तिकै मनमा कस्तो घोँचे जस्तै भयो ।
काठमाडौं । अनुरागमान सिंह कुवँरको नाम आउँदा बित्तिकै भिलेन भन्ने छाप हरेकको दिमागमा आउँछ । नेपाली चलचित्र उद्योगका भिलेन भनेर चिनिने कलाकार कुवँरको आज जन्मदिन परेको छ ।
उनी आज ४० वर्ष पूरा भएर ४१ औँ वर्षमा लागेका छन् । सर्वाधिक सफल चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ मा उनले मुखियाको भाइको छोराका रुपमा अभिनय गरेसँगै उनको चर्चा थप चुलिएको छ ।
चलचित्र ‘रातो घर’, ‘वडा नम्बर ६’, ‘ए मेरो हजुर–२’, ‘शत्रुगते’, ‘छक्का पञ्जा –३’लगायतका चलचित्रहरुमा काम गरिसकेका अनुभवि भिलियन अनुराग कुँवरलाई जन्मदिनको अवसरमा बिहानैदेखि उनका शुभचिन्तक तथा आफनतले शुभकामनाको वर्षा गराइरहेका छन् ।
उनले चलचित्र ‘के यो माया हो’ बाट डेब्यू गरेका हुन् । कलाकारिताका अलावा व्यवसाय र समाजसेवामा समेत हात हालेका कलाकार अनुरागमान सिंह कुवँरलाई जन्मदिनको अवसरमा हाम्रो पनि शुभकामना ।